Kolikoly sy fararaotam-pahefana ao Ambohipo Cité
Sahiran-tsaina ireo mponina ao Ambohipo Cité noho ny afitsoky ny olona sasany izay miseho ho mahalala olona etsy sy eroa. Fantatra ankehitriny fa voatsindry vola avokoa ny ambaratonga izay heverina fa any ambany indrindra, ny eo afovoany ka hatrany amin'ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana. Ny olona manao fahadiasoana indray izao no manana ny rariny.
Adin-tany no niantombohan'ny zava-drehetra. Tsy nisy famarotana tany nataon'ny SEIMAD intsony taty aoriana kanefa misy mpiavy amin'ny faritra Sofia nanizingizina fa tompon-tany ao Ambohipo Cité, kanefa tsy manana taratasy manamarina izany akory ny tenany. Taitra ny mponina mahita ity olona manorina trano eo amin'ny toerana izay tsy azo anaovana izany akory, nanontany ny alalana nahafahana nanao izany. Kinanjo, tsy nisy porofo manamarina fa azy ny tany ary tsy nisy alalana avy any amin'ny kaominina Antananarivo Renivohitra akory. Naneho fihetsika tsy fankasitrahana io fibodoana toerana io ny sasany amin'ny mponina ka nanomboka nandrava ireo hazo izay handrafetana ny toeram-ponenana. Ny tompon'andraikitry ny fokontany teo aloha dia nialangalana tsy nandray andraikitra akory fa nanipy ny baolina tany amin'ny kaominina satria tsy asany hono izany.
Etsy an-daniny, malahelo ny mponina amin'ny afitsoky ny mpiavy izay tsy manara-dalàna ka nampakatra ny raharaha teny amin'ny kaominina, hay moa ka efa voafahana vola ny tao ka nisondrotra moramora ny rindrina tao amin'ilya toerana izay voalaza ho fototry ny olana.
Etsy an-kilany, nalahelo tamin'ny fihetsika nataon'ny mponina ilay mpiavy ka rafitra ihany koa nampiasa ny olom-patratra mitana toerana ambony ka izay voalazan'ity farany dia tsy maintsy tanterahina avokoa. Gaga ny rehetra fa ny fitoriana napetraka tany amin'ny mpitandro filaminana dia nanjavona ka tsy misy porofo azo nanenjehana ilay mpiavy. Araka ny loharanom-baovao dia nahazo vola ny teny anivon'ny mpitandro ny filaminana ary nahazo baiko ihany koa hanongotra ny antontan-taratasy fitoriana satria "sefo be" no manao teny midina. Afaka madiodio ilay mpanorin-trano tsy ara-dalàna teny amin'ny fitsarana satria tsy nisy heloka nitazonana azy.
Mihenjan-droa ny tady amin'izao fotoana izao satria tsy hanaiky lembenana ny mponina ao Ambohipo Cité. Tsy izy rehetra satria misy ireo tsy miraika amin'ny firaisan-kina. Ny trano tsy ara-dalàna manomboka manaka-danitra ihany ka asa raha sahy hisy handrava. Matahotra ihany koa ny olona amin'ny fanararaotam-pahefana ataon'ny olon-dehibe eo amin'ny fitondrana satria moa samy iray fiaviana ka zara aza misy azy hiaro sy hanery ny tsy manam-basy. Misy ny olona ambonin'ny lalàna hatrany ary ao ireo izay tsy maintsy fehezin'ny lalàna. Manontany tena ny Malagasy hoe rahoviana vao afaka hisitraka ny zony feno tsy harahana kolikoly ny fiainany?